Homeराष्ट्रिय खबरप्रचण्डसँग तीन नेताको असन्तुष्टि
काठमाडौं : नेकपाका दुई अध्यक्षले पार्टीभित्र देखापरेको विवाद सल्टाउन गठन गरेको कार्यदलको वैधानिक हैसियतलाई लिएर तीन सचिवालय सदस्यले प्रश्न गरेका छन्। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदल गठनमा असहमति नरहे पनि यसको गठन प्रक्रियामा भने वैधानिकता खोजी गरेका हुन्। उनीहरूले शनिबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खुमलटारमा भेटे। दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र कार्यदल गठन गरेर काम गर्नु वैधानिक नहुने र भोलि कार्यदलले बुझाएको रिपोर्टमा कुनै नेताले नमान्ने अवस्था आए त्यसले मान्यता पाउने÷नपाउने विषय संवेदनशील रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैले पार्टी कमिटीको बैठक राखेर यस विषयमा निर्णय लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले प्रक्रियागत रुपमा त्रुटि रहेको नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाएर कार्यदल गठनको औपचारिक निर्णय लिन पनि दाहाललाई सुझाएका छन् ।कार्यदल गठन दुई अध्यक्षको मात्र सहमतिमा गरिनु आफैंले उठाउँदै आएको विधि ÷पद्धतिलाई खण्डित गर्ने काम भएको नेपाल, खनाल र श्रेष्ठको भनाइ छ। उनीहरूले सचिवालय बैठकबाट कार्यदल गठन गरेको भए प्रक्रियागत रुपमा मिल्ने धारणा दाहालसँग राखेका थिए।
‘सचिवालयमा छलफल गरेर निश्चित कार्यादेश दिएर कार्यदल गठन गरेको भए हुन्थ्यो। त्यो प्रक्रियागत रुपमा मिलेन’, दाहालसँग नेताहरूले भनेका थिए। वरिष्ठ नेता खनालका अनुसार कार्यदल कमिटीले बनाउनुपर्नेमा दुई अध्यक्षको मात्र सहमतिमा बनाएकाले प्रक्रियागत रुपमा नमिलेकाले नेताहरूले वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका हुन्। ‘कुनै पनि कार्यदल पार्टीका कमिटीले बनाउने हो। त्यो पनि कार्यदललाई दिने कार्यादेशसहित बनाएर गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कार्यदल बनाउँदा त्यसो गरिएको पाइएन। यस विषयमा पार्टीबाट निर्णय लिन पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउन हामीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छौं’, वरिष्ठ नेता खनालले भने।
नेकपाभित्र झन्डै ४६ दिन लामो विवादका बीच शुक्रबार दुई अध्यक्षले विवाद सल्टाउन महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय लिएका थिए। कार्यदलमा शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य छन्। ‘पार्टी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला कार्यदलको आवश्यकता किन पर्‍यो ? कार्यदल नै बनाउने हो भने ठूलो दायरामा छलफल गरेर बनाउन सकिन्थ्यो। कार्यदल नै बनाउँदा पनि दुई अध्यक्षले मात्र सहमतिमा बनाउनुभन्दा सचिवालय बैठक राखेर प्रस्ट कार्यादेशसहित बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो।
तर, त्यसो किन हुन सकेन ? यसले हामी आफंैले उठाएको विधि र संस्थागत निर्णयको कुरालाई खण्डित गर्ने काम गर्‍यो’, तीन नेताले सामूहिक रूपमा दाहालसँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने। दाहालले भने नेताहरूले उठाएको कुरा सही नै भए पनि कार्यदल गठन गर्दा त्यसतर्फ ध्यान पुग्न नसकेको जवाफ दिएका थिए। ‘अहिले कुनै सहमति जुटिसकेको छैन। कार्यदलले प्रस्ताव बनाएर ल्याएपछि थप छलफल गर्ने र सहमति खोज्ने भन्ने मात्र भएको हो। कार्यदल सचिवालय बैठक राखेर बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसतर्फ ख्याल गरिएन, त्यसमा कमजोरी भएकै छ।
तपाईंहरुका सुझाव ठीक हुन्, ध्यान पुग्न सकेन’, दाहालको भनाइ उद्धृत गदै छलफलमा सहभागी ती नेताले भने, ‘कार्यदल बनाउने कुरा तपाईंहरूसँग सल्लाह गरेकै थिएँ, विधि र पद्धतिअनुसार नै जानुपर्छ। तपाईहरुको कुराअनुसार नै म सचिवालय बोलाउन पहल गर्छु।’त्यसो त नेपाल, खनाल र श्रेष्ठले ओली र दाहालबीच कुनै भित्री सहमति बनिसकेको र त्यसपछि मात्र औपचारिकताका लागि कार्यदल गठन गरेको हुन सक्ने आशंका पनि गरेका छन्। सीधै दाहालसँगको छलफलमा नेताहरूले त्यसरी आशंकाको प्रश्न नउठाए पनि कार्यदलले ल्याउने प्रस्तावसम्म पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गर्ने रणनीति बनाएका देखिन्छन्।
कार्यदलमा ओली, दाहाल र नेपाल पक्षका दुई÷दुई जना नेता सम्मिलित छन्। दाहालले बिहीबार नै ओलीसँगको छलफलपछि कार्यदल बनाएर प्रस्ताव तयार पार्ने गरी आफूले ओलीसँग सहमति जनाएर आएको जानकारी भने दिएका थिए। शुक्रबार भने दाहालले नेपालसँग ओलीसँग छलफलमा जानु अगाडि कार्यदलमा राख्ने नेताहरूको नाम दिन आग्रह गरेका थिए। अन्नपुर्ण पोस्ट